Mpanamboatra sy mpamatsy divay ao an-tokantrano | KAIHUA
● Andiana ivelany
● Andiany anaty
Ny fizarana ao an-trano dia manana fahaiza-mamokatra 300-500 isan-taona, miaraka amina fotoana fandefasana haingana sy vidiny mifaninana. Ny ankamaroan'ny bobongolo dia natao ho an'ny latabatra sy seza, boaty fitehirizana, kabinetra, sobika fanasan-damba, kilalao sns ... amin'ny fahalalana ny fomba hampihenana ny fotoana tsingerina, ny fomba hampihenana ny lanja ary ny fomba hamoronana vokatra tsara sy matanjaka, ny lasitra azontsika dia mety hitondra lanjany lehibe ho an'ny mpanjifantsika.
Kalitao avo lenta (bobongolo sy kalitaon'ny vokatra)
Fanaterana ara-potoana (Sampelan'ny fankatoavana & fanaterana bobongolo)
Fanaraha-maso ny vidiny (vidiny mivantana sy tsy mivantana)
Serivisy tsara indrindra (Serivisy ho an'ny mpanjifa, mpiasa ary mpamatsy)
Rafitra— Rafitra fitantanana U8 ERP
Fanao mahazatra - Fanaraha-maso ny injeniera amin'ny tetikasa
Antontan-taratasy — ISO9001-2008
Fanamarinana - Rafitra fanombanana ny fahombiazana
Ekipa mpamokatra dia atrikasa famokarana milina, atrikasa fivoriambe, atrikasa fanaraha-maso, atrikasa famolavolana poloney ary atrikasa. Manaraka ny ekipa mpamokatra rehetra, misy teknisianina mihoatra ny 30% nomena loka ho toy ny teknisiana mpanelanelana mpanelanelana Ary koa ireo teknisianina manana traikefa mihoatra ny 10 taona. mihoatra ny 20%.
Ekipa fametahana: ahitana milina marokoroko, milina semi-presitive, milina mazava tsara, ivon-toeran'ny milina 5-axis, programa ary vondrona hafa. Ny atrikasa iray manontolo dia mandrakotra fiaramanidina. Ny fanodinana rehetra dia fehezin'ny ERP.
Ekipa fivoriambe: ny mpamorona lasitra rehetra dia afaka mifantoka amin'ny fanaovana lasitra izay hainy tsara. Ny salanisa niainan'ny mpanao bobongolo dia 20 taona mahery.
Ekipa fitsikilovana: Miaraka amin'ny milina fitsikilovana 100T-500T, ireo mpandraharaha dia mahatakatra tsara ny fitsipiky ny fizahana, ny fomba hifehezana ny fizahana.
Ekipa mana-poloney: miaraka amin'ny fifandraisana lalina amin'ny ekipa mivondrona dia fantatr'izy ireo ny fomba hahatratrarana ny takiana poloney amin'ny karazan-vokatra, eny fa na ny haavon'ny loko fitaratra aza.
Ekipa tsindrona: manana milina tsindrona azo avy amin'ny 120T-3300T izahay, miaraka amin'ny robot, clamping magnet and clamping hydraulic. Ireo mpandraharaha dia afaka mizaha toetra amin'ny toe-javatra izay akaiky ny fepetra famokarana ary mihoatra ny faran'ny famokarana mihitsy aza, mba hahafahan'ny mpanjifanay manana andinin-tsoratra tsara.
Teo aloha: Diviziona fampitaovana ao an-trano
Manaraka: Fizarana fiara
Bobongolo varavarana fiara
Bobongolo tontonana fitaovana automobile
Lasitra bumper fiara
Lasitra kodiarana aoriana fiara